१२७ रुपैयाँ प्रतिशेयर आम्दानी रहेको लघुवित्तको करिब २० करोडको आईपीओ आउँदै, कसलाई कति पर्ने ? निगरानी -
१२७ रुपैयाँ प्रतिशेयर आम्दानी रहेको लघुवित्तको करिब २० करोडको आईपीओ आउँदै, कसलाई कति पर्ने ?
काठमाडौं । १२७ रुपैयाँ प्रतिशेयर आम्दानी रहेको एक लघुवित्त कम्पनीको करिब २० करोडको आईपीओ छिट्टै बजारमा आउने भएको छ । मोरङको कटहरीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १९ करोड ७७ लाख ३० हजार बराबरको १९ लाख ७७ हजार ३ सय कित्ता शेयर आईपीओका रुपमा आउन लागेको हो । कम्पनीको हालको चुक्ता पुँजी ४१ करोड ६ लाख ७० हजार रहेकोमा सो लघुवित्तले १९ करोड ७७ लाख ३० हजार कित्ता शेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्न लागेको हो ।
चालु आवको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको सो लघुवित्तले सो अवधिमा प्रतिशेयर १२७ रुपैयाँ कमाएको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीको जगेडा कोषमा ७५ करोड ७५ लाख २१ हजार रहेको छ भने कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ २८४ रुपैयाँ रहेको छ ।
कम्पनीले रु. १०० दरमा आईपीओ जारी गर्ने एवं हालको धितोपत्र नियमावलीअनुसार १० कित्ते प्रावधान कायम रहेकाले कम्पनीको शेयरमा आवदेन गर्नेहरुमध्ये १ लाख १९ हजार ७ सय ३० जनालाई १० कित्ताका दरमा शेयर भाग पुग्ने देखिन्छ । यद्यपि जारी गरिने आईपीओ शेयरमध्ये केही प्रतिशत शेयर सामूहिक लगानी कोष तथा केही प्रतिशत संस्थाका कर्मचारीहरुलाई प्रदान गरिनुपर्ने भएकाले करिब १ लाख ८५ हजार हाराहारीमा सर्वसाधारणले शेयर प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ । सो कम्पनीले आईपीओ निष्काशनका लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन गरिसकेको छ । बोर्डबाट अनुमति प्राप्त भएपछि कम्पनीले सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्काशन गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
४ जेठ, काठमाडौं । अब प्रहरीले मास्क नलगाउनेलाई जरिवाना तिराउने र होल्डिङ सेन्टरमा राखेर...
पुरातत्व विभागका पूर्व महानिर्देशक अमात्यको निधन
३१ वैशाख, काठमाडौं । पुरातत्व विभागका पूर्व महानिर्देशक साफल्य अमात्यको कोरोना संक्रमणबाट...
संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशी १०२ औं वर्षमा
३० वैशाख, काठमाडौं । वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको १०२ औँ वर्षमा पुगेका छन् ।...
विशाल बजारको शेयरमा यू–टर्न, बेच्नेहरु मालामाल, किन्नेको हुँदैछ यसरी बेहाल
काठमाडौं । विशाल बजार कम्पनीको शेयरमा आज निकै चलखेल भएको छ । अघिल्लो दिन ७ हजार ४ सय ६०...
सिईडिबी हाइड्रोले प्रकाशन गर्यो आईपीओ निष्काशनको मिति
काठमाडौं । सिईडिबी हाइड्रोले आईपीओ निष्काशनको मिति तोकेको छ । सो कम्पनीले बुधबार विवरणपत्र...
एनआईसी एसिया लघुवित्तको मूल्य १० कित्ताको कारोबारमै १० प्रतिशत बढ्यो
काठमाडौं । एनआईसी एसिया लघुवित्तको शेयरमूल्यमा सोमबार पनि तीव्र उछाल आएको छ । अघिल्ला...
१५ सय बजार मूल्य भएको कम्पनीको आम्दानी १० रुपैयाँ !
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)मा सूचीकृत रहेको एवं धितोपत्र बजारमा प्रतिशेयर रु....
कुन शेयरकाे मूल्य बढी टिकाउ ? हेर्नुस् वाणिज्य बैंकहरुकाे अवस्था
काठमाडौं । लगानी गरेको कम्पनी राम्रो चाहिने भनेको यस्तै बेलामा हो । तपाइँ यस्तो शेयर...
रेबतबहादुरले छोडेको नासो — ढुंगानाले गर्नुपर्नेछ अब यी काम
काठमाडौं । तिहारको शुभकामना र आफ्नो कार्यकालको अन्तिम औपचारिक भेटमा रेवतबहादुर कार्कीले...
‘यो तीजमा राम्री मै’ नयाँ तीज गीत बजारमा